विधि र पद्दतिमा नचल्दा ! « Khabar24Nepal
हाल देशको राजनीतिमा देखिएको तरलताले गर्दा देशी बिदेशी केहि दलाल माफियाहरुलाई त मुनाफा नै बढी भएको होला तर सच्चा देशभक्त जनताको लागि भने पक्कै पनि यो सुखद विषय होइन । बिगत केहि समय अगाडिदेखि घटित घटनाक्रमहरु जस्तै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार भित्र लागेको धमिरा, पद र कुन्ठाको अन्तर्कलह, निरीह प्रतिपक्ष, सरकारनिकट पार्टीका केहि नेताहरुको भूमिका प्रतिपक्षकोजस्तो देखिनु, जस आफु लिने अपजस सरकारलाई । आदि इत्यादि कारणले गर्दा संसद बिघटनको स्थिति आयो । तत्कालिन नेकपा भित्रको अन्तरकलहले पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दा दलीय भागबन्डाको राजनीति शुरु भयो ।
….नेपाली काङ्गेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने बाहिर जे जस्तोरुपमा प्रस्तुत भएपनि भित्री आकांक्षा भने प्रचन्डसंगको सांठगाठ भन्दा पनि बढी ओलीतिरै झुकेको देखिन्छ । अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको गुट भने कुनैपनि हालतमा केपीको पक्षमा देखिदैनन ।….
नेकपा पार्टी भित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा अर्को ऋषी कट्टेलको नेकपाले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आफनै बाटो तय गर्ने फैसला सुनाएसंगै पूर्ववत नेकपा एमाले भित्र फेरि एक किसिमको तरङ पैदा भएको छ । केहि समुहहरु गुट्गत भेला गर्दै हामी पनि केहि त हौं भन्दै हिड्ने क्रममा अलमलमा परेको छ । उता नेपाली काङ्गेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने बाहिर जे जस्तोरुपमा प्रस्तुत भएपनि भित्री आकांक्षा भने प्रचन्डसंगको सांठगाठ भन्दा पनि बढी ओलीतिरै झुकेको देखिन्छ । अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको गुट भने कुनैपनि हालतमा केपीको पक्षमा देखिदैनन । जसपामा पनि दुईगुट प्रष्टरुपमा देखिएकोले ठूलो समुहले केपीलाई नै सहयोग गर्ने मनसाय देखाए पनि अहिलेको अबस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीलाई अन्योलताको भूमरीले छोएको छ ।
गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले जीवनभरको राजनीतिको ब्याज जीवनको अन्तमा पार्टी त्याग र एउटा कमन्डलु नै पाए । मनमोहनको राजनीतिक जीवन पनि संघर्षमा नै बित्यो । उनको लागि कार पजेरोको त कुरै छोडौ सदैब रिक्साको यात्रा हुन्थ्यो र छोटो समय प्रधानमन्त्री हुंदा अन्तमा अस्पत्तालको बेडबाट राजिनामा दिनुपर्यो । मदन भन्डारीले छोटो समयमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धी हात त पारे तर जीवन नै गुमाउनुपर्यो । सुशील कोइराला पनि जीवनभर पारिवारिक मोहबाट टाढा रहि देशको लागि संघर्ष गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा लम्पसारबादी नहुनाले प्रधानमन्त्रीकाल राम्रो भएन।
तसर्थ, सात पुस्ताको चिन्ता गर्ने र द्वैद चरित्र भएका नेता, प्रत्येक शब्दको मूल्य हेरी समाचार कोर्ने पत्रकार, आफ्नो बिद्दतालाइ दलीय स्वार्थनुरुप प्रष्फुटित गर्ने बुद्दिजीबी, सम्बन्धित विषयको नक्कल गर्दै पिएच डि गर्ने प्राज्ञीक , नक्कली प्रमाणपत्रधारी मेडिकल डाक्टर र शिक्षक, डलर, युरो र भारुको लोभले नियुक्ति पाएका बिदेसी कुट्नीतिज्ञ , सबैलाइ समेट्न नसक्ने सत्तापक्ष, निरीह प्रतिपक्ष, विधि, बिधान र पद्दतिमा चल्न नसक्ने दलीय राजनीति, कागले कान लग्यो भनी कान नछामी कागको पछि दौडने जनताबाट राज्यले केही पाउनु भन्दा पनि झन धेरैथोक गुमाउने रहेछ । त्यसैले राज्य संचालनको लागि निश्वार्थी र त्यागी नेता अनि अनुशासित र नैतिकवान जनता हुनैपर्ने रहेछ ।
अहिलेको सत्तारुढ दलले पनि यहि विधि अबलम्बन गर्न खोजेपनि आफ्ना नै बिराना भएपछि केहि सिप नलागि संसद बिघटनको स्थितिमा सरकार पुग्न बाध्य भयो । आज विश्व र नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला यहि मौका छोपी पद, पावर र कुर्चिकोमोहमा दौडिन खोज्दा पार्टीलाइ घाटा त भयो भयो देसको स्थिति नै फेरि अतीततिर फर्किने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
तर हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि भने इतिहासले यस्ता नैतिकवान र चरित्रवान नेताहरुलाइ पाखा लगाएको छ । गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले जीवनभरको राजनीतिको ब्याज जीवनको अन्तमा पार्टी त्याग र एउटा कमन्डलु नै पाए । मनमोहनको राजनीतिक जीवन पनि संघर्षमा नै बित्यो । उनको लागि कार पजेरोको त कुरै छोडौ सदैब रिक्साको यात्रा हुन्थ्यो र छोटो समय प्रधानमन्त्री हुंदा अन्तमा अस्पत्तालको बेडबाट राजिनामा दिनुपर्यो । मदन भन्डारीले छोटो समयमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धी हात त पारे तर जीवन नै गुमाउनुपर्यो । सुशील कोइराला पनि जीवनभर पारिवारिक मोहबाट टाढा रहि देशको लागि संघर्ष गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा लम्पसारबादी नहुनाले प्रधानमन्त्रीकाल राम्रो भएन।
त्यसैले प्रजातन्त्रमा कुनैपनि दल सत्तामा हुंदा स्वार्थरहित भावनबाट विधि, बिधान र पद्दतीमा चल्यो भने त्यही सिद्दान्तलाई अनुसरण गर्ने बानि भावी पुस्ताको पनि हुन्छ । जब देश प्रणालीमा चल्छ तब न सरकार ढल्ने भय, न त बिकास र समृद्दी भएन भन्ने तनाब । त्यसैले अहिलेको सत्तारुढ दलले पनि यहि विधि अबलम्बन गर्न खोजेपनि आफ्ना नै बिराना भएपछि केहि सिप नलागि संसद बिघटनको स्थितिमा सरकार पुग्न बाध्य भयो । आज विश्व र नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला यहि मौका छोपी पद, पावर र कुर्चिकोमोहमा दौडिन खोज्दा पार्टीलाइ घाटा त भयो भयो देसको स्थिति नै फेरि अतीततिर फर्किने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
अहिले हरेक दलहरुमा विधि, बिधान र सिद्दान्तमा लागेको लेपले गर्दा दलालको दलदलमा फँसिराखेका छन । आज यहि विधि र पद्दतिमा नचल्दा जनताले दुःख पाएका छन । नेताज्यूहरु बिचार बिमर्स गरि बढो गम्भिरतासाथ अगाडि बढ्नुहोस । अन्यथा अगाडि होस आएन र पछि चेत आयो भनेजस्तो, नारा समाजबादको काम नाजिबादकोजस्तो नहोस ।
विश्व बैंक र मन्त्री नेम्वाङ्गबीच छलफल
देश, जनता, सुशासन र विकास सरकारको मूलमन्त्र : प्रधानमन्त्री ओली
मेलम्चीको सम्पूर्ण काम ठप्प,